eNasha.com - हेल्मेटको कमाल !
हेल्मेटको कमाल !
टाउकोबाट बढेमाको ट्रकले किचिपिची पार्दै अगाडि बढ्दाको अनुभव कस्तो हुन्छ भन्ने सुनाउन रायन लिप्सकम्ब अहिले जीवितै छन् । उनलाई सोध्नुभयो भने एक वाक्य मात्र भन्न सक्छन्- "साँच्चिकै अचम्मको !"
एपी समाचार संस्थाका अनुसार अमेरिकाको सियाटल निवासी लिप्सकम्बको मुटु त्यो घटनापछि बेस्सरी अत्तालिएका छन् । तर सौभाग्य के थियो भने उनको टाउकोमा गज्जबकै हेल्मेट चाहिँ लगाउन भुलेका थिएनन् । उनलाई आज जीवितै देख्न पाउने अवसर यही हेल्मेटले दिलाएको हो भन्न उनी चुक्दैनन् ।
युनिभर्सिटी अफ विस्कसिन मेडिसनका औषधि विज्ञानका यी २६ वर्षीय पात्र गएको शुक्रबार आफ्नै सुरमा मोटरबाइकमा गइरहेका थिए । उनलाई पछाडिबाट ठूलो ट्रकले ठक्कर दियो । कतिसम्म भने उनको बाइकलाई पनि ट्रकले घिसार्दै लग्यो । त्यसपछि त उनको होशहवासै गायब भयो । तर यो के ? ट्रक न त रोकिने नाम लिन्छ न त उनले आफू बाँच्ने कुनै उपाय नै देख्छन् । तर पनि हिम्मत जुटाएर उनले बाइक्को टाउको घुमाए र ट्रकबाट अलग्गिए । तर उनी अलग्गिन पनि पाएका थिएनन्, ट्रकको पछाडिको चक्काले उनको टाउको भेटिहाल्यो र टाउकोलाई किचिपिची पार्दै अगाडि बढ्यो ।
"मैले टायर आफूतिर आउँदै गरेको चाल पनि पाइनँ तर के भयो भने टाउकोमा ज्यादै असजिलो महसूस चाहिँ गरेँ" सियाटलबाट निस्किने द क्यापिटल टाइम्ससँगको साक्षात्कारमा उनले भने- "धरोधर्म तपाइँलाई नढाँटी भन्छु, ट्रकको टायरले टाउकोमा टेक्दा चाहिँ अचम्मको अनुभव हुने रहेछ !"
ट्रकको किचाईले उनको हेल्मेटको पछाडिको भाग कुच्चिएको छ । त्यसो त उनको हेलमेटमा टायरले टेकेको स्पष्ट चिनो बसेको छ । त्यसलगत्तै उनी अस्पताल गए र उनलाई तीन घण्टाको उपचारपछि घर फिर्ता लगियो ।
यता प्रहरीले यस घटनामा केही पनि बताउन अस्वीकार गरेको छ । ट्रकले उनलाई ठक्कर दिएर भागेकाले कसले ठक्कर दियो भन्ने बारेमा प्रहरी अझै अनभिज्ञ छ ।
यता दुर्घटनामा परेका लिप्सकम्बले आफ्नो टाउको अहिले बढी दुख्न थालेको र घाँटीमा समस्या देखिन थालेको बताएका छन् । उनले थपे- "ज्यानै जानुपर्ने घटनामा घाँटी र टाउको दुखाई त अलि कम नै भयो नि, होइन र ?" यता यो दुर्घटनाले आफ्नो पीएचडी कार्यक्रममा कतै असर त गर्ने होइन भनी चिन्तित भएका छन् । तर आफ्नो दह्रो हेल्मेटप्रति उनले कृतज्ञता व्यक्त गरे ।
परिस्थिति यस्तो पनि ! उदेकलाग्दो माया सुन्दरी सेलेब्रिटी मुद्दा मामिला गुगल मूर्ख्याइँ इन्टरनेट बलिउड भव्यता विज्ञापन नग्नता कीर्तिमान श्रीमानश्रीमती प्रविधि उपाय फट्याइँ हलिउड